သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများကို Activity အက်ပ်တွင်မည်သို့ကြည့်ရမည်နည်း ငါက Mac ပါ
သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများကို Activity အက်ပ်တွင်မည်သို့ကြည့်ရမည်နည်း
Apple Watch ကို iPhone နှင့်တွဲဖက်လိုက်သောအခါ "မှော်" ဖြင့်စမတ်ဖုန်း၏ပင်မမျက်နှာပြင်တွင်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ပေါ်လာမည်။ လှုပ်ရှားမှု iOS 9.3 ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူ "Trainings" ကဏ္ section အသစ်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
App တွင်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ပတ်သက်သောကဏ္ new သစ် လှုပ်ရှားမှု ၎င်းသည်သင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ်၊ အစာစားခြင်း၊ တက်ကြွသောကယ်လိုရီများ၊ နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်အကွာအဝေးအတွင်းရှိကွဲပြားခြားနားသောအချက်အလက်များအားခြေရာခံရန်အလွန်အဆင်ပြေပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် Apple Watch ရှိပါက၊ ယခုတွင်၎င်းသည် ပို၍ ပင်တက်ကြွလာသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အိုင်ဖုန်းမှ Apple နာရီမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုခြေရာခံ။ ဖော်ပြပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီဟာကလျှောက်လွှာမှာသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်လဲဆိုတာပါ လှုပ်ရှားမှု.
ပထမဆုံး app ကိုဖွင့်ပါ လှုပ်ရှားမှု သင့် iPhone ပေါ်တွင်စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေအလယ်ပိုင်းရှိသင်တန်းအပိုင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံးသင့်အတွက် Apple Watch ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်သင့်ကြောင်းသတိရပါ iPhone ကို.
လေ့ကျင့်ရေးဇယားတွင်သင်၏လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများကိုလနှင့်ချီပြီးစီစဉ်ထားသည်။ အချက်အလက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုကြည့်လိုပါကသင်လိုချင်သည့်လကိုနှိပ်ပါ။ သတင်းအချက်အလက်များကိုတစ်နေ့ချင်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်ဒီမျက်နှာပြင်ကနေသင့်ကိုဝေမျှနိုင်ပါတယ် လှုပ်ရှားမှု iPhone မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အပေါ်ထောင့်တွင်တွေ့နိုင်သော« Share »အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ခြင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » Mac Pro » သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများကို Activity အက်ပ်တွင်မည်သို့ကြည့်ရမည်နည်း
Paula agustina ဟုသူကပြောသည်
Apple Watch ကို Mac နှင့် တွဲဖက်၍ မရပါ။
Paula Agustina အားပြန်ပြောပါ
Apple Watch ကို Mac နှင့် တွဲဖက်၍ မရပါ။ ကျွန်ုပ်၏လေ့ကျင့်ခန်းများကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တွေ့မြင်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
ဟယ်လို။ ပြီးတော့ MacBook မှာကြည့်ဖို့လား။
တင်မ်ကွတ်ခ်သည်အိန္ဒိယမြေပေါ်တွင်ရောက်ရှိနေပြီး Apple ကိုတိုင်းပြည်သို့ရောက်ရှိရန်ဘုရားဖူးခရီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်